Soosaaraha Ugu Wanaagsan ee EVA-ga iyo Warshad | Yilibao
Badbaadada iyo ilaalinta deegaanka: badeecadu waxay qaadataa habka riixitaanka filimka EVA, daabacaadda bey'ada u fiican, caafimaad qabta oo aan sun ahayn.
1. Badbaadada iyo ilaalinta deegaanka: badeecadu waxay qaadataa habka riixitaanka filimka EVA, daabacaadda bey'ada u fiican, caafimaad qabta oo aan sun ahayn
2. Dusha sare ee ka-hortagga taraatigga, bedqabka iyo taraatigaba: si siman loo habeeyay lidka taraafikada, cagaha ma taraaracaan, taabashada jilicsan ee u dhow maqaarka, kor u qaad khilaaf, u oggolow carruurta inay ciyaaraan oo ay gurguurtaan si ammaan ah.
3. Midabyo dhalaalaya iyo naqshado badan: adeegsiga noocyo kala duwan oo naqshad naqshadeysan ah, ilmaha aad u jecel oo ku siinaya boos xulasho oo dheeraad ah.
4. Naqshadeynta dhagxaanta: dhumucyo kala duwan ayaa la heli karaa.
5. Si fudud loo nadiifiyo: waxay u baahan tahay oo keliya in lagu tirtiro maro saxan oo qoyan si ay siigada u nadiifiso.
Komishankeenu waa inuu siiyaa macaamiisheena iyo macaamiishayada tayada ugu sareysa iyo alaabta dhijitaalka ah ee la qaadan karo ee dhijitaalka ah ee wax soo saarka warshadaha ee Shiinaha iibka Hot Hot Non Non Slip Fitness Mat Extra Thick High Density EVA Layli Dheeraad ah oo Dheeraad Ah Oo Dheeraad Ah Oo Saaxiibtinimo Leh, Waxaannu wadnaa cayrsiga WIN -KU guuleysta macaamiisheenna. Waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa macaamiisha ka socota dhammaan bey'ada kor imaaneysa booqasho iyo sameynta xiriir dheer oo waara.
Xusuusnow inaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto wixii macluumaad dheeraad ah waxaanan ku siin doonaa liiska qiimaha tartanka markaa.
Waxaan bixinaa adeeg xirfad leh, jawaab deg deg ah, bixinta waqtigeeda, tayo aad u fiican iyo qiimaha ugu fiican macaamiisheena. Qanacsanaanta iyo amaanta wanaagsan ee macaamiil kasta ayaa ah mudnaantayada. Waxaan diiradda saareynaa faahfaahin kasta oo ka baaraandegidda dalbashada ah ee macaamiisha illaa ay ka helayaan alaab ammaan ah oo cod leh adeeg saad wanaagsan iyo kharash dhaqaale. Iyada oo ay taas ku xiran tahay, wax soo saarkeenna si aad ah ayaa loogu iibiyaa waddamada Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfur-bari Aasiya. U hogaansanaanta falsafada ganacsiga ee 'macaamiil marka hore, hore u sii soco', waxaan si kal iyo laab ah u soo dhaweyneynaa macaamiisha dal iyo dibadba inay iskaashi nala sameeyaan.
Hore: Slide weyn
Xiga: Slide yar